Samafalayaashii MSF ee afduubka logu heystey Soomaaliya oo maantey gaaray Spain | warsugansomaliya.wordpress.com
War kasoo baxay hay’adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa lugu caddeyey in ay dib xoriyadoodi u heleen
muwaadiniin u dhashay wadanka Spain,kuwaasi oo in muddo labo sano ah ku afduubnaa gudaha dalka Soomaaliya.
Labo qof oo ka tirsan shaqaalaha hay’adda dhaqaatiirta aan xudduudda lahayn oo shalay la sii daayay ayaa gaaray magaalada Madrid ee dalka Spain sida lugu sheegey war saxaafadeed kasoo baxay hay’adda,labadaan qof ayaa lugu kala magaacaba Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut waxana ay u dhashay dalka Spain.
Labadaan ruux ayaa muddo ku jirey gacanta kooxo hubeysan oo Soomaali ah kuwaaso kasoo afduubay xerada qaxootiga IFO 2 oo ku taalla Dhadhaab oo ah gobolka Waqooyi-bari Kenya 13-kii bishii October ee sanadkii 2011.
Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut oo u dhashay dalka Spain ayaa diyaarad milateri waxay ka qaadday dalka Jabuuti, waxaana laga dejiyay garoon milateri oo ku yaalla meel u dhow magaalada Madrid ee caasimada dalka ay kasoo jeedaan ee Spain.
Xiligii ay gaaren magaalada Madrid ayaa waxaa warbaahinta lahadley madaxda hay’adda dhaqaatiirta aan xudduudda lahayd Jose Antonio Bastos waxana uu sheegay in ay wanaagsan tahay xaaladdooda caafimaad, laakiin ma uusan faahfaahin sida ay ku gaareen dalka Jabuuti iyo qaabka loo agaasimay sii deyntooda.
Jose Antonio Bastos madaxda hay’adda dhaqaatiirta aan xudduudda lahayd ayaa sidoo kale hadalkiisa ku sheegey inuu ad ugu faraxsan yahay inay markale arkaan shaqaalahooda oo muddo ku afdubna Soomaaliya.
Ma ahaa markii ugu horeysey oo sidaan oo kale gacanta kooxo Soomaali ah ay ka baxaan shaqaale katirsan hay’addaha gar garka ka fuliya Soomaaliya.
← Qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah Kenya oo jecleyn inay dib ugu noqdaan Dalka Soomaaliya!!(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Hooyo Soomaaliyeed iyo Gabadh ay Dhashay oo saxaraha dalka Yaman Oon ugu dhintay →